Karate: nizotra araka ny tokony ho izy ny fifaninanam-pirenena | NewsMada
Karate: nizotra araka ny tokony ho izy ny fifaninanam-pirenena
Nifarana omaly, alahady, ny fiadiana ny tompondaka nasionaly 2018, taranja karate, notontosaina teny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Mpikatroka miisa 179 avy amin’ny ligy manerana ny nosy no nivondrona sy nifaninana nandritra ity fifaninanana ity.
Nizotra araka ny tokony ho izy, ny fifaninanam-pirenena tamin’ity taom-pikatrohana 2018 ity, na dia teo aza ny fahatarana teo amin’ny fanatanterahana azy, raha ny fanazavan’ny filohan’ny federasiona malagasy ny taranja karate. Raha oharina tamin’ny taon-dasa, nitombo ny traikefan’ny mpikatroka, indrindra ny avy amin’ny faritra. Ity farany izay nahitana fitomboana teo amin’ny lafiny fahavitrihana satria maro an’isa izy ireo no tonga teto an-drenivohitra niatrika ity fiadiana ny tompondaka nasionaly ity. Raha atao anefa ny kajy, mbola ny ligin’Analamanga hatrany no lohalaharana tamin’ny fisalorana ny medaly volamena. Fandresena miisa 20 no teo am-pelatanan’ireo mpikatroka avy eto Analamanga, tao anatin’ireo ady miisa 24, tamin’ny lalao famaranana. Nahazo fandresena iray avy kosa ny amin’ny ligin’ny Vakinankaratra, Matsiatra Ambony ary ny ligin’Antsinanana, tamin’ny alalan’i Razafindranoro Eliane (-61 kg) kumite vehivavy, Razafimpanjato Diella (-75 kg) kumite lehilahy ary Andriatsimbazafy Tojo (+84 kg) kumite lehilahy.
Nanambara ireo mpikatroka fa nahazoana traikefa ity fifaninanam-pirenena 2018 ity satria miha mivoatra hatrany. « Misy fivoarana ny karate malagasy ankehitriny, raha oharina ny tamin’ny lasa. Efa manana traikefa ny karate-ka gasy ary efa miha manahaka ny any ivelany. Antenaina ny hisian’ny fiovana goavana afaka fotoana fohy, raha toy izao hatrany ny fivoarana ho an’ny karate eto Madagasikara”, hoy ny nambaran’i Mami-Mick, mpikatroka avy eto amin’ny ligin’Analamanga.
Nafana ny adin’i Tanjona sy i Tantely
Anisan’ny ady nandrasan’ny olona maro be tonga nijery ity fifaninanam-pirenena, omaly, ity ny ady teo amin’i Tanjona sy i Tantely, sokajy Kumite lehilahy, latsaky ny 60 kg. Nafana vay ny ady teo amin’ny roa tonta ary tena niady tokoa. Nandritra izany, nivoaka mpandresy tamin’ny 4 no ho 1 Ratsoramanana Tanjona. Fahadimy izao no nandrombahany ny anaram-boninahi-pirenena teo amin’ity sokajy ity. “Nazava ihany ny fandresena satria hita ho reradreraka ny mpifanandrina, manana tombony rahateo aho teo amin’ny vatana raha noharina taminy. Mafy anefa i Tantely satria manana tanjaka be izy ary ny traikefa samy manana ny azy”, nanazava Ratsoramanana Tanjona, taorian’ny ady mafana nihaonany tamin’i Tantely. Raha tsiahivina, nahazo fandresena intelo nisesy ny taona 2011, 2012, 2013 i Tanjona. Ny taona 2016 kosa ny fahatelo ary izao tamin’ity fifaninanam-pirenena 2018 ity izao no fahadimy.
Tontosa ny fivoriam-be
Nifanindry an-dalana tamin’ity fifaninanam-pirenena ity ny fivoriam-be teo anivon’ny federasiona malagasy ny taranja karate. Tamin’izany indrindra no nametrahana lalàna hentitra sy fitsipika matotra avy amin’ny ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tsy tokony hisy tombo sy hala, hoy ny ministera, ny fanantontosana ny fifidianana ny mpitantana ny federasiona, raha ny fanazavana nentin’ny filohan’ny federasiona, Andrianavomanana Solofo Barijaona.